iphone 7 charger batteries best price China Manufacturer
Description:Mafy ny batterie Iphone,Iphone Battery Light Yellow,Iphone very vola mihidy
Home > Products > Batterie IPhone > IPhone 7 Battery > iphone 7 charger batteries best price
Izy io dia ny fanoloana batterie iphone 7, ny fahaiza-manao dia 1960 mAh, ny habeny sy ny fahaiza-manao dia mitovy amin'ny voalohany. Manana hakingana maherin'ny 2200 mAh ihany koa isika, aorian'ny fampiasana ity pilina ity dia mety hampitombo 15% farafahakeliny ny fiarovan-tenan'ny iphone . Ny sela batterie dia ampiasaintsika material-pure polymer cobalt, hay kokoa sy safty. Miaraka amin'ny TI chip, dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny fanavaozana ios. HQQN iphone batterie no safidinao tsara indrindra ho an'ny finday an-tariby mandeha amin'ny varotra sy ny fiarovana.
Q6.Inona no vidin'ny fividianana entana?
A6.Pls E-mail us ny modely nividianana ny batterie iPh sy ny isa vondron'olona, ​​ny vidiny marina dia mifanaraka amin'ny habetsahana.
Mafy ny batterie Iphone Iphone Battery Light Yellow Iphone very vola mihidy Miaro ny bateria Iphone 6 I batterie Iphone Miala haingana ny batterie Iphone Mianjera haingana ny batterie Iphone Hisolo ny bateria IPhone